Ungave uri kuita pachako kana uchishanda nomumwe, ndinoda kupa zvidimbu zviviri zano kuti Ndakaona zvikuru nomumwe basa rangu. Chokutanga, funga zvikuru kwazvo sezvinobvira pamberi chero mashoko yave inounganidzwa. zano iri pamwe sokuti pachena kuti vaongorori akajaira kumhanya kuedza, asi zvakakosha kwazvo kuti vanotsvakurudza akajaira uchishanda guru mashoko manyuko (ona Chitsauko 2). With guru date manyuko dzakawanda basa chinoitika pashure une data, asi kuedza ndiwo rwakatarisana; zhinji basa vanofanira kuitika usati kuunganidza mashoko. Imwe yenzira kuzvimanikidzira umene kunyatsofunga pamusoro magadzirirwo yako uye ongororo nderokuva uye kunonyoresa kuongorora chirongwa chiedzwa yenyu. Sezvineiwo, vakawanda zvakanakisisa-tsika kuti kuongorora experimental Data vave formalized kupinda nhau nhungamiro, uye nhungamiro aya nzvimbo huru kutanga paaisika kwako kuongorora chirongwa (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) .
The piece zano wechipiri kuti hapana kuedza kuda kuva akakwana, uye nokuda kuti, unofanira kuedza kugadzira dzakatevedzana kuedza kuti kusimbisa mumwe. Ndava kutongonzwa izvi sechinhu armáda nzira; pane kuedza kuvaka imwe hombe yehondo, imi ingava nani kuvaka mijenya ngarava madiki pamwe rwakakwana nesimba. Kupira uku multi-kuedza zvidzidzo zviri purogiramu ari zvepfungwa, asi ivo vari chisingawanzoitika kumwewo. Sezvineiwo, neyamapani mutengo nevamwe digitaalinen kuedza kunoita aya multi-kuedza mhando inodzidza nyore.
Uyewo, ndinoda kupa zvidimbu zviviri zano kuti vari ishoma ikozvino asi zvinonyanya kukosha kuti afunge digitaalinen zera kuedza: kusika razero shoma mari Data uye kuvaka nezvetsika kupinda magadzirirwo yenyu.